यी १० कारणहरु नबुझेपछि ह्वात्तै बढ्छ तपाईको तौल ? के हुन् त ती बुझ्नैपर्ने कुरा ? | सुदुरपश्चिम खबर
यी १० कारणहरु नबुझेपछि ह्वात्तै बढ्छ तपाईको तौल ? के हुन् त ती बुझ्नैपर्ने कुरा ?
दिनदिनै दौडिनुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ। खाना बार्नुहुन्छ। क्यालोरी नाप्नुहुन्छ। तर पनि मोटाउनु छोड्नुभएन। के भयो त ? पक्कै केही न केही गडबडी छ। तपाईको भोजन यी १० कारणले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनसक्छ।
डेलिमेट डटकममा शारीरिक प्रशिक्षक जेम्स स्टेरिङले डाइटिङबारे केही सुझाव दिएका छन्। १० वटा कारणले गर्दा हामीले खाने भोजनले नकरात्मक असर गर्ने कुरा उनले बताए।
पानी धेरै पिउनाले शरीरको तौल नघटेता पनि यसले भोकलाई कम गर्छ र खाइराख्ने बानीलाई हटाउँछ। धेरै मानिसले तिर्खालाई भोक भनेर गलत बुझ्ने गर्दछन्। उनीहरु पानी कम खाना बढी खाने गर्दछन्।
त्यसैले एक दिनमा कति पानी खाने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। पानी कति खाने भनेर निर्धारण गर्न यो फर्मुला प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईको तौल कति पाउण्ड छ जोख्नुहोस्।
तपाईको तौललाई दुईले भाग गर्नुहोस् अनि भागफललाई ०.०२८ ले गुणन गर्नुहोस् र उक्त गुणनफल नै तपाईले एक दिनमा कति लिटर पानी खाने भन्ने कुरालाई जनाउँछ।
जस्तो तपाईको तौल १२८ भएदेखि त्यसलाई २ ले भाग गर्दा ६४ हुन आउँछ। अव ६४ लाई ०.०२८ले गुणन गर्नुहोस् र गुणनफल १.७९२ हुन आउँछ। यसको अर्थ अब तपाईले १.७९२ लिटर पानी पिउनु राम्रो हुन्छ।
तर दैनिकरुपमा व्यायाम गर्ने व्यक्तिले भने शरीरमा क्षय भए अनुरुपको पानी पिउनुपर्छ। र, तपाईले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हाम्रो शरीरले व्यायाम गरेको ९० मिनेटमा अधिकांश काब्रोहाइड्रेटलाई खपत गर्ने गर्छ।
भोजनको सचेतरुपमा नियन्त्रण गर्दा यसले तौल घटाउनमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्छ र यो ज्ञानबिना हामीले के खादैं छौ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्दैनौ । आवश्यक मात्रामा सन्तुलित भोजन खानुपर्छ तर कति प्रोटिन, कति काव्रोहाइड्रेट कति फ्याट र कति भिटामिन खाने भनेर नाप्दै हिड्न भने सकिदैन।
के तपाई ओमेगा ३ –माछाको तेल वा शाकाहारी भए एल्जी –प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
तौल घटाउनका लागि ओमेगा ३ निकै सफल भएका छन्। यसको कारण के हो भन्दा अन्य फाइदाको साथसाथै ओमेगा ३ ले तपाईको शरीरका सेललाई तरल बनाईराख्दछन् जसले गर्दा सेलहरु इन्सुलिन प्रति संवेदनशील हुन्छन्।
यसको अर्थ के हो भन्दा जब सेल तरल हुन्छ तव शरीरमा फ्याट जम्मा हुन पाउदैन । त्यसै गरी शाकाहारीका लागि एल्जी शरीरका सेललाई तरल बनाउन निकै सहयोगी हुन्छन् ।
प्रत्येक रात कति सुत्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईको शारीरिक क्षमतालाई निर्धारण गर्दछ । जब तपाई कम सुत्नुहुन्छ तब खानाको रुची बढाउने हर्मोन ग्रेलिन बढ्दछ वा खानाको रुची कम गराउने हर्मोन लेप्टिन घट्छ । यसले गर्दा शरीरको मेटाबोलिजम सुस्त हुन्छ र तौल वृद्धि हुन्छ। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)
भगवानका प्रिय व्यक्तिहरुको हातमा मात्रै हुन्छ यस्तो चिन्ह, तपाईको पनि छ की ?
शरिरका यी अङ्गबाट कट्कट् आवाज निस्केमा हुनसक्छ खतरनाक बिमारी !!